15% Jiri Social Media iji chọta Azụmaahịa Obodo | Martech Zone
You maara pasent 15 nke ndị na-azụ ahịa na-eji saịtị ịkparịta ụka n'socialntanet achọ ihe azụmahịa ndị obodo? Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-efunahụ ohere iji zụlite obodo nke ha n'ime mgbasa ozi mmekọrịta, na-enyere aka tolite ikike na mmata ha na netwọkụ nke ndị nwere mmasị na ngwaahịa na ọrụ ha. Ọbụna ndị ghọtara ohere ahụ ka na-agba mbọ imezu ya, n'agbanyeghị.
Anyị atụlewo Balihoo si obodo akpaaka toolset toolset na blọọgụ na mbụ. Ha weputara ihe omuma ihe a na nso nso a eziokwu mgbasa ozi azụmahịa ọ bụla kwesiri ịmara.
Tags: Balihooakpaaka ahịa mpagharanchọta mpagharaakpaaka ahịa ahịa akpaakaeziokwu mgbasa ozi
Aha infographic a na-efu okwu “Naanị”. Emechara ha niile tụnyere 11% nke ndị na-azụ ahịa ka na-eji akwụkwọ edo edo ebipụta. Mgbasa mgbasa ozi abụghị ebe ọkụ maka ọchụchọ mpaghara (ọbụlagodi, ma aka).